प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले यसरी भेट्न मिल्छ? « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले यसरी भेट्न मिल्छ?
प्रकाशित मिति : 2021 March 30, 8:10 am
काठमाडौं, चैत १७ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्नु सामान्य भए पनि प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालुवाटारमा गएर दुई घण्टासम्म भेट गर्नुलाई भने अस्वाभाविक मानिएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गरेपछि उनको तीव्र आलोचना भइरहेको हो।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच धेरै समयदेखिको तिक्तता रहेका कारण निवासमा पुगेर लामो भेट भएको हुनसक्छ। स्रोतले भन्यो सभामुखले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमै भेट गर्नुपर्दथ्यो, प्रधानमन्त्रीको निवासमा भेट गर्नुभन्दा १८ गतेको संसद् बैठक बस्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद् भवनमा भेट गर्नुपर्दथ्यो वा चैत १० गतेको संसद् बैठक बस्नुअघि भेट गर्नुपथ्र्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार ११ बजेदेखि २ बजेसम्म भेट भएको छ। नागरिक दैनिकबाट